✅ CycleTrader Trading Zvirongwa -Day Trade eminis ES500 | NQ100 - NinjaTrader 8 Paunenge uine bhizimisi rakanakisa uchishandisa CycleTrader, zvakaoma kusaita mari.
Bhuku / Demo
CycleTrader Custom Trading Zviratidzo
CycleTrader Custom Auto Trading Systems - Mazano
Tinomhanya paN NinjaTrader 7 & 8
Dharira Dhigiri TRADER Demo
Mutero weKateresi - Zviratidzo - June 25th
Great work Jerome !!! Ichi chitsva che CT09 Bare Delta Purojekiti yemapapi inotipa muganhu wakakomba wekupinda nekubuda mumusika. Shandisai nguva yakareba yenguva yekutsvaga kuti urongedze kushandiswa kwakanaka. Zvinobatsira kana ukavimba mathemati !!! Izvi zvitsva zvinotipa muganhu wakakomba. Apo taive tichitaura zuro, ndakati $ 7,400 vhiki rakapera nechekare CT zviratidzo uye $ 312 usiku hwekupedzisira kutengesa nezviratidzo zvitsva mushure mokunge tadzikanganisa pamwe chete, uye $ 2,500 nhasi. Idai CT09 ... Heino huchapupu. WAITA HAKO!!
Mutero weKateresi - Zviratidzo - June 26th
Ndave ndapiswa kazhinji uye ndisati ndaonana naJerome pamusoro pezviratidzo zvake, ndakamubvunza kuti nei izvi zviri nani. Mhinduro yake yaiedza demo uye ona pakutanga. Ndakaita izvi uye nhasi ndakazvitenga. Ndakanga ndichikwanisa kuona puropu yekutengo kupinda zvakanaka kupfuura kare. Izvozvi chiratidzo cheC CT 09 chakandipawo zvakanakisisa kubva. Ndinokutendai Jerome pamusana pekusika idzi. Inoshandura nzira yandinoita nayo uye ini ndiri kuita mari. Kwira $ 1450 nhasi pane 1 kusvika 4 mujenya mu ES 500.
CycleTrader Trading Indicator NT8
CycleTrader Systems P / L Mutariri NT8
Demo / Mutengo
Usambofa Uchienda Kumusoro
© Copyright 1988 -2019 Bressert Trading Technology, LLC. - Fri, July 19, 2019
Muteereri Wenyaya - Zviratidzo
Wow, Great Courses !!! Ndinozviona ikozvino, iwe wakarurama! Iwe unogona kupinda mumatengo ari nani uye unonzwa uine chivimbo pamusoro pebasa rimwe nerimwe. Ndinokutendai nekuratidza izvi kwandiri ... kumusoro $ 875 zuva rangu rokutanga kutamba-svetana nemitambo iyi. Iwe unogona kunge uine Muti weGOLD! WAITA HAKO!
Muteereri Wenyaya - Zviratidzo - June 18th, 2019
Hi - Ndaifarira mitemo yako yekutengesa. Ndakagadzira $ 1,000 madhora kubva kwairi zuva rokutanga neAimulator account mu ninja mutengesi. Saka ndakavatenga nhasi.
... NDAKAKANAKA SEMA INDICATORS !!!
Dan BR - Day Trader
Sawa Jerome, ini ndinofanira kukuudza kuti kutengesa uchishandisa iyo inonyatsoyerera chiratidzo chinoshamisa ...
Muteereri Wenyaya - Zvirongwa - June 11th, 2019
Ndangopedza nhano imwe yeTest Step 50K inosangana mumazuva 11. 🙂 uchishandisa chirongwa che 1003!
Muteereri Wenyaya - Zviratidzo - May 31st, 2019
Jerome- Aiva nezuva rakanaka nhasi mukutanga rangu ane zviratidzo; yakabudiswa $ 1900 pane e-minis. Ichokwadi chakanga chakafanana nekuwana magirazi angu uye kuaisa, achikwanisa kuwona misika nenzira yakajeka munzira dzisingangowani kune imwe nzvimbo. - Ndichadzoka shure uye kupedzisa kutenga kwangu pamusoro pevhiki-tariro-iwe une zvakanaka iwe pachako.
... Ndinoda, uye, handichazotengesi pasina CycleTraderPro, nguva dzose!
Muteereri Wenyaya - Zviratidzo - June 21st
Pamutemo 1 awa uye 40 mins Ndiri kukwira $ 1,000 kutengeserana 1 min chati chete inoshambadzira kunyanya chibvumirano che 1 uye 2 kana zvichidiwa. Kungotengesa izvo zvawakandiratidza ... ichokwadi kunyanya kunetseka kwandaimbove ndatora mhizha.
Handina chokwadi kana mumwe munhu kunze uko anoratidza inzwi sechiratidzo nenzira yaunoita. Asi iyo ndiyo tiketi yegoridhe yekuona chimiro! Basa rinotyisa!
Ini zvino ndamirira kutora mhizha kusvikira ndaona VMIa Volume ichienda nenzira imwechete seyo index kukosha uye BOOM! WOW!
Bader, CA - NQ Day Mutengesi
Muteereri Wenyaya - Zviratidzo - June 20th, 2019
Ndaida VMI uye mutsara wegorosi nemabhaji ebha. Basa guru Jerome. Ndatenda
Ndakazviwana ini pandakawana CycleTRADER Systems. zviitiko zvinoshamisa. Euro yakaita $ 6335, uye imwezve $ 3800 ... Ndokutendai zvikuru Jerome, iwe wakaita basa rezvakaitika mukuvandudza aya masangano kwatiri.
Ndaifarira zviratidzo mushure mekuongororazve - ndakazvitenga! Ndizvo zvandinofarira kutengeserana. Inoratidzika semubatsiro unokosha zvechokwadi unoshandisa munguva chaiyo yekutengesa. Iwe unotova nechigadzirwa chikuru chezvinangwa zvangu. Ini ndakanyatsopindirana nepamusoro pekunge iwe uri kutarisa kushandisa mari.
Jerome - The CT 34 Kutsigira / Kurwisana Windows uye CT 09 Bhuku Doro Delta hazvina kuitika.
Zvine mapenzi kuti ndinoita zvakasiyana nezvandinofanira kuita kana zvinouya kune delta bars, kureva kutengesa pane zvitsvuku. Iye zvino ndinosvika pahwindo uye ndinotarira kutenga kune tsvuku uye kutengesa kana chiri chepuru nokuti ndiyo iyo inoshanda uye ini ndinogona kuiona ikozvino kubva pakurondedzerwa Purogiramu Yevatengesi Zviratidzo.
Chero, chero mimwe mitambo inoshanduka kwandiri. Kuuraya iyo yapfuura mazuva maviri neichi chete ichi 15 min delta bar chati
Muteereri Wenyaya - Zviratidzo - June 19th, 2019
Jerome, - Mashoko haagoni kurondedzera kushanda kweChircle Trader. Iwe unongotenga vatengesi zvombo zvakawanda zvinonyatsogadziriswa kuitira kuti UENDE misika zuva uye zuva kunze ... .complete understatement. Nekuvandudzwa kwakasiyana siyana uye kuvandudzwa kunovandudza pane yakatove yakasiyana uye software inoshandiswa iwe hauzombomisi kushamisa ini. Iwe uri muumbi wezvokwadi, vatengesi vatengesi.
Nguva dzose kugadzirisa kune mararamiro anogara achigadziriswa asi uchigadzirisa nzira yepamusoro. Izvozvo zvichange zvichishandurwa ne new delta bar volume uye TRUE rubatsiro / mahwindo asina simba / nzvimbo dzakasiyana nezvandakaona kare. Iwe unoziva nguva yekutarira kutengesa nekutenga pasina kupora kwekutsvaga kwekuongorora. Izvo zvakaoma kuuya nekutengeserana kwemazuva ano. Totally objective trading.
Vakawanda vangabatsirwa ne software yako. Ndiri muchengeti muduku (2-3 mikonti) uye zvisingashamisi kuti handigoni kuwana chinangwa che 1K zuva rega rega uchishandisa software yako. Zvakafanana nokuve neXray magirasi uye iwe unogona kutarisira gorosi raizoitika. Ingo "tevera maitiro" sezvaunotaura. Haikwanisi kuva yechokwadi.
Numeri usareva nhema!
Maitiro ekugadzirisa matanho ane zvakawanda zvisingakwanisi zvisizvo, Zvimwe zvacho zvinorondedzerwa pasi apa. Hapana mumiririri ari kuitwa Kuti chero nhoroondo ichaita kana kuti inogona kuwana purogiramu kana kuti inorasikirwa yakafanana kune avo vakaratidzwa; Ichokwadi, pane nguva dzakawanda kupesana kwakakosha Pakati pekufungidzira kushanda kwemigumisiro nemigumisiro chaiyo Yakazoitwa neimwe hurongwa hwekutengeserana.
Chimwe chezvikwereti zvekufungidzira kushanda kwakaguma ndezvokuti zvinowanzogadzirirwa pamwe nekubatsirwa kwekutarisa. Mukuwedzera, kushambadzira kwepfungwa hakuiti kusanganisa kwemari, uye hapana Hypothetical rekodhi rekodha rinogona kuverenga zvachose zvakakonzerwa Nengozi yemari yekutengesa chaiyo. Semuenzaniso, kukwanisa Kumira kunorasikirwa kana kubatana pane imwe purogiramu yekutengeserana Mukuda kwekutengesa kurasikirwa zvinhu zvinogona kukanganisawo zvigaro zvekuita zviitiko zvekutengesa chaiyo.
Kune zvimwe zvinhu zvakawanda zvinowanzoenderana nemisika mune zvese kana kuti kushandiswa kwemhando ipi neipi yepurogiramu yekutengeserana isingagoni kunyatsorongedzerwa zvakakwana mukugadzirira kwekufungidzira kushanda kwemigumisiro uye zvose zvinogona kukanganisa zvido zvemabhizimisi Kuparidzirwa kwehungwaru: Futures uye forex trading inowanikwa Panjodzi uye haisi yevatengesi vose. Mumwe mutengesi anogona kukwanisa kurasikirwa zvose kana kupfuura zvinotengeswa pakutanga. Dambudziko guru ndiro mari inogona kurasikirwa pasina kuparadza iyo kuchengetedza kwemari kana mararamiro ehupenyu. Chengeterwo chete inofanira kushandiswa pakutengesa uye chete avo vane ngozi yakakwana mari inofanira kuongorora kushambadzira. Basa rekare harisi izvo zvinoratidza zviitiko zvemunguva yemberi. Kuzivisa: kushandiswa kwezvikwereti uye zvigadzirwa zvinosanganisira ngozi dzakawanda uye hazvifaniri kuitwa pasina kunzwisisa njodzi dzose dzine chokuita nekutengesa uye kutenga zvekuchengetedza.
Mutengesi, profittrader software inotsanangurwa pano yakagadzirirwa kuva chirongwa chekubatsira vatengesi muzvisarudzo zvekutsvaga. Iwe unongova mutoro wekuongorora nekugadzirisa nguva uye ndezvipi mazita ekubatanidza chero kupi zvako kwekutengeserana, uye kugadzirisa kukodzera kwezvisarudzo zvako.
Nokukweretesa mune zvigumisiro kana zvigadzirwa, unogona kurasikirwa nemari yako yose mari. Basa rekare haritsigiri misi yeramangwana. Chero hupi hwekutengeserana hunorondedzerwa panzvimbo ino hunogona kunge husingakuiti mari uye unoda kunzwisisa njodzi inowanikwa pamusoro apa.
Tinofanirwa kuzivisa izvi - Iyi mharidzo ndeyekuti zvinangwa zvedzidzo chete uye maonero anotsanangurwa ndeaya emuenzaniso chete. Zvose zvinotengeswa zvinofanira kuonekwa sekufungidzira uye hazvifanirwe kutarisirwa kuti zvidzokorwe mune imwe nhoroondo yebhizimisi rekutengesa.
Uchapupu huripo pawebsite ino hungave hunomirira vamwe vatengi kana vatengi uye haisi chivimbo chekushanda kwemazuva ano kana kubudirira.